နားခိုရာ: May 2008
ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ Forward Email လေးတစ်ခုထဲက စာသားတွေပါ။ သဘောကျလို့ ဘလော့မှာ တင်ထားလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်အဆင်းလှရင် အချက်အပြုတ်မကျွမ်း၊ ချက်တာပြုတ်တာ ကျွမ်းကျင်တော့ မနူးညံ့ပြန်၊ နူးညံ့နွဲ့နှောင်းတော့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်က မရှိ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးရှိတာကျတော့ ယောက်ျားဆန်၊ မိန်းမပီပီနေတော့ အသုံးအဖြုန်းက ကြီး၊ ချွေတာစုဆောင်း တတ်တာကျတော့ ခေတ်ရေစီးကို လိုက်မမှီ၊ ခေတ်မှီတာကျတော့ စိတ်မချရ၊ စိတ်ချရတာကျတော့ ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မလှပြန်။
အရည်အချင်းရှိရင် ရုပ်ဆိုးမယ်၊ ရုပ်ချောရင် ငွေမရှာတတ်ဘူး၊ ပိုက်ဆံရှာတတ်ရင် အိမ်ထောင်ရေးကို အလေးမထားပြန်ဘူး၊ အိမ်ထောင်ရေးပိုင်းမှာ ဖိစီးပြန်ရင် တခြားကိစ္စမှာ မဖြစ်ထွန်းဘူး၊ အရာရာ ဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်တယ် ဆိုတဲ့လူမျိုးကျတော့ အနုအရွလေးတွေနဲ့ ရိုမက်တစ်မဆန်တတ်ပြန်ဘူး၊ အီစီကလီ ကျွမ်းကျင်ပြီး ရိုမက်တစ်ဆန်တတ်ပြန်တော့ စိတ်ချအားကိုးလို့ရဘူး၊ အားကိုးရတဲ့ လူမျိူးကျတော့ ခိုင်းစား လို့ရရုံကလွဲပြီး ဘိုသီပတ်သီနဲ့ အပေအတေတစ်ယောက်လိုနေမယ်။
ဆင်းရဲသားတွေ ဝက်မွေးတယ်၊ လူကုံထံတွေကျတော့ ခွေးမွေးတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေ အိမ်မှာ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် စားတယ်၊ လူကုံထံတွေ ဟိုတယ်တက်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေ လမ်းပေါ်မှာ စက်ဘီး စီးတယ်၊ လူကုထံတွေ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စက်ဘီးစီးတယ်။ ဆင်းရဲတုန်း မင်္ဂလာဆောင် ချင်တယ်၊ ချမ်းသာတော့ လင်မယားတွေ ကွဲချင်တယ်။ ဆင်းရဲတုန်း မယားက secretary တာဝန်တွဲယူရတယ်၊ ချမ်းသာတော့ secretary က မယားတာဝန် တွဲယူရတယ်။ ဆင်းရဲတုန်း ချမ်းသာချင်ယောင်ဆောင်တယ်၊ ချမ်းသာတော့ ဆင်းရဲချင်ယောင်ဆောင်တယ်။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ... ဆင်းရဲသားတွေ အသားစားတယ်၊ လူကုံထံတွေပုစွန်စားတယ်၊ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ ကျတော့ အလကားရတာမှန်သမျှစားတယ်။ ယောက်ျားတွေမြင့်ချင်တယ်၊ မိန်းမတွေပိန်ချင်တယ်။ ခွေးတွေ အင်္ကျီဝတ်ကုန်ပြီး လူတွေကျတော့ ကိုယ်ပေါ်ကအသားတွေ ပေါ်နိုင်သလောက် ဖော်ကြချွတ်ကြတယ်။
Posted by little moon at 4:32 PM No comments:
Euro ပွဲတွေပြမဲ့အချိန်က ည ၁၀နာရီခွဲရယ် မနက် ၁နာရီရယ်ဆိုတော့ အပြင်ထွက်ပြီး ဘီယာဆိုင်မှာ ကြည့်ဖို့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ Family Entertainment ကရောင်းတဲ့ pay TV ကိုပဲဝယ်လိုက်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ Receiver ရယ် Cardရယ် Premium package တစ်လစာအတွက် တစ်သိန်း နှစ်သောင်းငါးထောင် ၊ Euroပွဲတွေကြည့်ဖို့ ခုနစ်ထောင် စုစုပေါင်း ၁၃၂၀၀၀ကျပ်ကုန်သွားတယ်။
TV lineတွေ အားလုံးကတော့ promotion အနေနဲ့ တစ်ပတ်လောက်ပွင့်နေမယ်။ ESPN, StarSport,5Series, 5Movie, 5Carton စတာတွေက လကုန်အထိရမယ်။ သက်တမ်းမကုန်ခင်မှာ လိုင်းတစ်ခုခုတော့ ထပ်ဝယ်ထားရမယ်။ မဟုတ်ရင် expire ဖြစ်သွားရင် Card ဖွင့်ခဆိုပြီး ၈၀၀၀ကျပ် ထပ်ပေးရမယ်ဆိုပဲ။
အခု Euro ပြီးရင် ဘောလုံးပွဲရာသီတွေက August လောက်မှပြန်စတာဆိုတော့ Espn, StarSport ပါတဲ့ package ကိုတော့ August ထဲကြမှပဲထပ်ဝယ်တော့မယ်။ အားကစား၂လိုင်းနဲ့ အခြား Discovery, MTV, National Geographic, CNN စတာတွေနဲ့ စုစုပေါင်း ရှစ်လိုင်း (CNN+7) က တစ်လကို တစ်သောင်း ခြောက်ထောင်၊ အားကစားနှစ်လိုင်းနဲ့ 5Series, 5Movie စာတွေနဲ့ တွဲတဲ့ Premium package က တစ်လကို တစ်သောင်းလေးထောင် အဲဒီနှစ်ခုထဲက တစ်ခုဝယ်ရမှာပဲ။
လောလောဆယ် ဇွန်လကုန်ခါနီးမှာတော့ သက်တမ်းပြတ်မသွားအောင် StarMovie, National Geographic, Animal planet စတာတွေထဲက နှစ်ခုလောက်ကို သုံးလစာလောက် ၀ယ်ထားလိုက်မယ်။ အခုကာလက စီးပွားရေးကလည်း သိပ်မကောင်းဘူးလေ။
Posted by little moon at 3:33 PM No comments:
Posted by little moon at 4:01 PM 1 comment:
Posted by little moon at 12:18 PM 1 comment:
Posted by little moon at 5:51 PM No comments:
Posted by little moon at 11:03 AM No comments:
တဖြေးဖြေးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့လမ်းတွေပေါ်က သစ်ကိုင်းသစ်ခက်တွေ ရှင်းလင်းကုန်ပြီ။ အချို့နေရာတွေမှာတော့ လမ်းဘေးတွေမှာ ပုံထားတာတွေရှိသေးတာပေါ့။ ဓါတ်ဆီဈေးကလည်း ၅၀၀၀လောက်မှာ ငြိမ်နေပြီ။ လျှပ်စစ်မီးတွေလည်း တဖြေးဖြေးပြန်ရနေပြီ။ (မရသေးတဲ့နေရာတွေတော့ အများကြီး ရှိသေးတာပေါ့လေ) ကိုယ့်အိမ်မှာက တနင်္ဂနွေညပိုင်းက စပြီး မီးပြန်လာပြီ။ နာဂစ်ကြောင့် ကွေးကောက်သွားတဲ့ တီဗွီ အင်တင်နာလေးကို ပြန်ထောင်ပြီး တီဗွီဖွင့်ကြည့်တယ်။ အဲ ဖယောင်းတိုင်နဲ့နေလာတာ တစ်ပတ်လောက် ဆိုတော့ မီးချောင်းတွေရဲ့ မီးရောင်တွေက မျက်စိတွေ ကျိန်းလို့ ကိုယ်တို့ရုံးက ဒီနေ့ညနေကစပြီး မီးပြန်ရပြီ။ အရင်လိုပဲ အလှည့်ကျပျက်ဦးမှာလား ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့။
ဆန်ဈေးတွေကတော့ သိသိသာသာတက်လာပြီ။ ဒီနှစ်ဆန်ထွက်နည်းမှာက သေချာနေပြီလေ။ နောက်နှစ်ဆို ပေါ်ဆန်းမွှေးတောင် စားရပါ့မလားမသိ။ ဆန်ဈေးတက်ပုံကလည်း ကြမ်းလိုက်တာ။ မုန်တိုင်းမကျခင်က ပေါ်ဆန်းတစ်ပြည် တစ်ထောင်၊ တစ်ထောင့်တစ်ရာလောက်ပဲရှိတာ။ မနေ့ညက ၀ယ်တော့ တစ်ပြည် တစ်ထောင့်ခုနစ်ရာကျပ်ဖြစ်နေပြီ။ ညက မုံရွာက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖုန်းလှမ်းဆက်ရင်း စကားကြုံလို့ ပြောတာက မုန်တိုင်းမတိုက်ခင်ကတည်းက တပေါင်လိုလို သင်္ကြန်စာလိုလို တစ်ခုကြားခဲ့ရတယ်တဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ ၂၀၀၉ မှာ သစ်ဥသစ်ဖုပဲစားရမယ်တဲ့။ :) ဟုတ်သလိုလိုတော့ရှိနေပြီ။
အခြားလုပ်ငန်းတွေတော့မသိ ကွန်ပျူတာအပျော့ထည် အရောင်းအ၀ယ်ကတော့ သုညနီးပါးကို ထိုးကျသွားတာပဲ။ ဒီအတိုင်း သုံးလလောက်ဖြစ်နေဦးမယ်လို့လည်း မှန်းကြတယ်။ ဘော်ဒါတစ်ယောက် ပြောသလိုပဲ မြန်မာပြည် computer industry က အခုမှမပျက်ရင် နောက်မပျက်တော့ဘူးတဲ့။
မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေကို ကိုယ့်နီးစပ်ရာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက နိုင်သလောက် လှူကြတန်းကျ ထောက်ပံ့ကြတာ မြင်ရတော့ တော်တော့်ကို စိတ်ချမ်းသာမိတယ်။ ကိုယ်တွေလည်း နိုင်သလောက်လေးတော့ ၀င်ကူညီ လှူတန်းခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေကို ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်အောင် ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဖို့လိုမယ်။ တွေ့နေရတာ တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေ လာလှူတာကိုပဲ မျှော်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ အင်း …. သူတို့ဖက်က ကြည့်ရင်လည်း လာလှူကြတော့လည်း တစ်အိမ်ထောင် ဆန်တစ်ပြည်ဆိုတော့ နောက်နေ့အတွက် နောက်တစ်ခေါက်တန်းစီ…. ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ တစ်အိမ်ထောင် တစ်ပါတ်လောက် စားလို့ရအောင် ပေးထားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။
တီဗွီမှာပြတဲ့ အညာသားကြီးလာကြည့်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ရွက်ဖျင်တဲတွေကတော့ ရှယ်ပဲ။ တဲတစ်ခုဆီမှာ ပေါ်ဆန်းရှယ် တစ်အိတ်ဆီနဲ့။ အော်မယ် …ကိုယ့်အိမ်မှာတောင် တစ်ခါဝယ်ရင် နှစ်ပြည်ပဲဝယ်တာ။ ဒုက္ခသည် လာအားပေးတာနဲ့မတူပဲ မြေပိုင်ရှင်က အလုပ်သမားတွေကို လာကြည့်တာကြနေတာပဲ။ ဟိုးဆောင်းတွင်းကာလ တရုတ်မှာ နှင်းမုန်တိုင်းဖြစ်တော့ ဟူကျင်တောင် လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးတာတွေကို သတိရမိသေး။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေက ကြာမယ် အများကြီးအားစိုက်လုပ်ကြရမှာ။ လှူတာတန်းတာတွေက နောက် အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဆို လူတွေက အီပြီး ရပ်သွားနိုင်တယ်။ နလန်ထူဖို့ကတော့ အတော့ကို လုပ်ယူရဦးမှာ။ တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲရတဲ့အထဲ နာတာရှည်ရောဂါကြီးထပ်ရသွားမှာ စိုးရိမ်စရာပဲ။
Posted by little moon at 1:47 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ကြီးက သစ်ကိုင်းအကျိုးအပြတ်တွေရယ် သစ်ရွက်တွေရယ် ပြတ်ကျနေတဲ့ ဓါတ်ကြိုးတွေရယ်နဲ့ ညစ်ပတ် စုတ်ပြတ်နေတယ်။ သစ်ပင်ကြီး တော်တော်များများလဲကုန် ကျိုးကျကုန်ပြီ။ မုန်တိုင်းပြီးကတည်းက ဂျိုးဖြူရေကလည်း မလာသေး မီးကလည်းမလာတော့ နေရာတော်တော်များများမှာ ရေအတွက် ပြသနာတက်နေကြပြီ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိတက်လာတယ်။
အခုရက်ပိုင်း သွပ်ပြားတွေ သံတွေ မီးစက်တွေ အရမ်းအ၀ယ်လိုက်နေတယ်။ မနက်က ဓါတ်ဆီဈေးက တစ်ဂါလံကို တစ်သောင်းတဲ့။ ရုံးကိုလာကြတဲ့ ၀န်ထမ်းလေးတွေ ဘတ်စ်ကားခ ငါးရာတစ်ထောင် ကျပ်နဲ့လာခဲ့ရတယ်။ တစ်ချို့ဆို ခရီးတစ်ပိုင်းလောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြရတယ်။ လမ်းတွေပေါ်က သစ်ပင်သစ်ကိုင်းကျိုးတွေ အထိုက်အလျောက်တော့ ရှင်းကုန်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ကျန်နေသေးတယ်။ အခုနေ့လည်ပိုင်းမှာ ဓါတ်ဆီဈေးက တစ်သောင်းနှစ်ထောင်လို့ကြားတယ်။ ကိုယ့်ရုံးမှာ လိုအပ်သလောက် လူဆယ်ယောက်လောက်ကိုပဲ လမ်းစရိတ်ပေးခေါ်ထားပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို သုံးလေးရက်လောက် ခဏနားခိုင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆီဖိုးက တစ်သောင်းလောက်ဆိုရင် မီးစက်နဲ့ ရေရှည် run ဖို့မလွယ်ဘူး။
ဘတ်စ်ကားခတွေက ဟိုနား ဒီနား ငါးရာ၊ နည်းနည်းဝေးရင် တစ်ထောင်လောက်ကျတယ်။ တက်စီတွေက တက်လိုက်တာနဲ့ ဟိုနားဒီနား နှစ်ထောင်ပဲ။
ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲမသိသေးပါဘူး။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ရင်လေးဖွယ်ပဲ။
Posted by little moon at 5:03 PM No comments:
နာဂိအလွန်ရန်ကုန်မြို့ကတော့ မြို့ပျက်ကြီးလိုပါပဲ။ သစ်ပင်ကြီးတွေ ဓါတ်တိုင်တွေ အလဲလဲအပြိုပြိုနဲ့ အိမ်အတော်များများမှာလည်း သွပ်မိုးတွေ အချို့တစ်ဝက်လန်ထွက်လို့ တစ်ချို့အိမ်တွေဆို အမိုးသွပ်ပြားလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ ယောက်ခမတွေနေတဲ့ လှည်းတန်းဖက်က အိမ်ယာတစ်ခုမှာတော့ အပေါ်ဆုံးထပ် (၈ထပ်) က အမိုးတွေမရှိတော့လို့ အဲဒီက မိသားစုတွေ ဓမ္ဒာရုံကို ရောက်နေကြပါတယ်။ မိုးကလည်း သည်းသည်းမဲမဲ အဆက်မပြတ်ရွာခဲ့လို့ အချို့နေရာတွေ ရေတင်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းများလည်း တော်တော်များများ ပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်။ အချို့ GSM တွေတော့ ဆက်လို့ရနေပါသေးတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်လည်း အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးလို့ ခရီးသွားမဲ့သူတွေ ဒုက္ခတွေ့နေကြပါတယ်။ ဒီမနက် ဗဟန်းဖက်ကနေ မြို့ထဲလာတာတောင် ပြိုလဲနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကားလမ်းကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်။ ကားတွေများပြီး လမ်းတွေ ပိတ်နေပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးကတော့ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် တစ်ပါတ်လောက် ပြန်ရမယ်မထင်ဘူး။ ဖုန်တွေပြတ်တောက်ကုန်လို့ အင်တာနက်လိုင်းတော်တော်များများလည်း ပြတ်ကုန်ပါတယ်။ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွေက စလောင်းတွေ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပျက်စီးကုန်တယ်။ စုတ်ပြတ်ကုန်တာရော အောက်ပြုတ်ကျကုန်တာတွေရော။ ဈေးနှုန်းတွေလည်း အထိုက်အလျောက်တက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီမနက် မနက်စာစားတာ ကြာဇံကြော်ကို ၁၅၀၀ ပေးလိုက်ရတယ်။ စားနေကြရှမ်းဆိုင်လေးပါ အရင်ဈေးက တစ်ထောင်ပဲ။
နာဂိမုန်တိုင်းဟာ ရန်ကုန်မြို့ကို မေလ(၂)ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ကျော်လောက်က စတင်ဝင်ရောက်ပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းတွေ တဖြေးဖြေးပြင်းထန်လာပြီး နောက်ဆုံး ဘယ်လောက်များပြင်းထန်လဲဆိုရင် ခြောက်ထပ်တိုက်အပေါ်ဆုံးက ကျွန်တော်တို့အခန်းဟာ ငလျင်ခပ်ပြင်းပြင်လှုပ်သလိုကို သိမ့်သိမ့်တုန်ပြီး ရမ်းနေပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးတွေက ည ၁၁ခွဲလောက်ကတည်းက ပြတ်သွားပါပြီ။ ခေါင်မိုးက သွပ်အချို့ လန်သွားပုံရတယ် ရေတွယိုလာပါရော။ အိမ်ခေါင်ထိပ်လေပေါက်လေးနှစ်ခုကနေ ရေတွေဝင်တာများ သင်္ကြန်ရေပက်နေသလားပဲ။ ပြုတင်ပေါက်မှန်ကကြည့်နေရင်း သွပ်တွေလန်ထွက်သွားတာ၊ စလောင်းတွေ အင်တင်နာတွေ ပြုတ်ကျကုန်တာ သစ်ကိုင်းတွေကျိုးကျတာတွေ မြင်နေရတယ်။ မနက် ခြောက်နာရီလောက်မှာ ခဏရပ်သွားပြီး သိပ်မကြာပါဘူး ပြန်စပြန်ရော ဒီတစ်ခေါက်မှာ မိုးက ပိုပြီးပါလာတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တိုက်လိုက်တာ မနေ့က (မေလ ၃ရက်) နေလည်ပိုင်းလောက်မှ ရပ်သွားတယ်။ မနေ့ကတော့ ဘယ်မှလည်း သွားမရဘူး လမ်းတော်တော်များများ ပိတ်ဆို့နေတယ်။ ကားတွေလည်း မရှိဘူး။ ဒီမနက်တော့ လမ်းတွေက သစ်ပင်တွေကို အထိုက်အလျောက်ရှင်းထားလို့ ကားတစ်စီးစာလောက်မောင်းလို့ရနေပြီ။ တိုက်စီတွေလည်း အနည်းအကျဉ်း ပြန်ထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုနား ဒီနားပဲလိုက်တယ်။ TV Lines တွေပြန်လွှင့်နေပြီလို့ နယ်ကဖုန်းဆက်တဲ့ အသိတစ်ယောက်ပြောလို့သိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုန်တိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့သတင်းတွေ မပါပဲ မဲရုံမဲရုံ သီချင်းတွေပဲလွှင့်နေသတဲ့ ကောင်းရော။
Hand Phoneလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတစ်ချို့တစ်ဝက်ရိုက်ထားပေမဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကူးဖို့ အခုအဆင်မပြေလို့ နောက်ရက်မှတင်တော့မယ်။
ဘာပဲပြောပြော အစိုးရကတော့ တော်တော်ဝမ်းသာမှာပဲ။ မဲပေးမဲ့ရက်နီးလာလို့ အင်တာနက်တွေ Oversea call တွေ စလောင်းက သတင်းတွေကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေမှာ အခုတော့ နာဂိကြောင့် အတော့ကို အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။
ကုန်းတွင်းပိုင်းတောင် ဒီလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်တာ ဧရာဝတီတိုင်းထဲက မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းကျတဲ့ မြို့တွေ ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မတွေးဝံ့ဘူး။ မေလ (၃)ရက်ညပိုင်း တီဗွီအစီအစဉ်တွေမှာ မဲရုံမဲရုံ ....မင်း ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီလား .... ဒီသီချင်းတွေကလွဲရင် မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှ သတိပေးချက် ညွှန်ကြားချက်တွေ ထွက်မလာဘူး။ နိုင်ငံခြား အင်တာနက်သတင်းတွေက ဆိုးရွားမယ် ရန်ကုန်ကို ဖြတ်နိုင်တယ် ပြောနေပေမဲ့ ဒီသတိပေးချက်ကို အင်တာနက်ကြည့်ရတဲ့ လူအချို့သာသိပြီး အများပြည်သူက ဘာမှမသိလိုက်ရဘူး။ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်မယ် ကိုနယ်ချဲ့လက်အောက်အရောက်မခံ စသည်ဖြင့် မရောင်ရာ ဆီလူး အော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေပေမဲ့ တကယ့် အရေးကြုံတော့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နိုင်လို့လား။ ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေ သတိပေးမှုတွေဘာလို့ထွက်မလာတာလဲ .... ဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ဖမ်းမယ်၊ ဆန္ဒပြရင်ပစ်မယ် ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးတွေကြရင် ကားနဲ့ ညကြီးသန်းခေါင်လည့်အော်နိုင်ပြီး ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ဆိုးတဲ့ မုန်တိုင်းဝင်မှာမျိုးကြတော့ သတိပေးဖို့ စိတ်ကူးမရှိကြဘူး။ မဲနိုင်ဖို့ပဲ အာရုံရောက်နေကြတာလား .... အာဏာကိုသာမက်ပြီး တာဝန်သိတတ်မှု တာဝန်ယူမှု စေတနာထားမှုဆိုတာတွေ မရှိတဲ့ကောင်တွေပဲ ......
Posted by little moon at 1:14 PM No comments: